China J115-001 Series Textile Mechanical Counter Counter yoMvelisi kunye noMthengisi | Wenchang
Umgaqo wokusebenza kunye neNtshayelelo: Ngokujikeleza kwe-axis yegalelo, ikhawuntari iqhuba umbungu wangaphakathi, izixhobo zentshulube kunye nezixhobo zokubonisa ukubonisa imijikelezo yokujikeleza kumaqela ama-4 eevili zokubala zokubala, ezilawulwa liqhina lokuhlengahlengisa icandelo. Xa isahlulo sokulungelelanisa iqhina sibonisa "A", iazis yegalelo iyajikeleza, kunye neqela A ukubala kwamavili kubalwa. Ukuba iqhina elihlengahlengisiweyo lihlengahlengiselwe kwi-B, C kunye no-D ngokwahlukeneyo, iqela lamavili okubala apho amanqaku eenqobana ahlengahlengisayo aya kubonisa imijikelo yokujikeleza kwe-axis yegalelo. Esi sibali singasetyenziselwa kuphela ukongeza ngokudibeneyo, ayinandlela yokwenza ngocoselelo. Ingasetyenziselwa ukurekhoda ukuphuma kweeshifti ezahlukeneyo kumatshini omnye, kwaye ikakhulu isetyenziswe kwi-looms kunye noomatshini bokwenza i-tape ngokutshintsha okuninzi, kushishino lwempahla eyolukiweyo.
Amaxesha ojikelezo lomboniso we-axis / wedijithi
001200r / min
1.5 N · cm